Wararka - Warshadaha Gacan-gashi ee Rubber-ka Malaysia: Kuwa Fiican, Kuwa Xun Iyo Kuwa Xun - Falanqaynta
Warshadaha Gacan-gashi ee Rubber-ka: Kuwa Fiican, Kuwa Xun Iyo Kuwa Xun - Falanqaynta
Waxaa qoray Francis E. Hutchinson iyo Pritish Bhattacharya
Cudurka faafa ee COVID-19 ee socda iyo Amarka Xakamaynta Dhaqdhaqaaqa (MCO) ayaa dhabar jab xoog leh ku ah dhaqaalaha Malaysia. In kasta oo Wasaaradda Maaliyaddu hore u saadaalisay in wax-soo-saarka waddanku uu hoos u dhici doono qiyaastii 4.5 boqolkiiba sannadka 2020-ka, haddana xog cusub ayaa muujisay in foosha dhabta ahi aad u fiiqmay, oo ahayd boqolkiiba 5.8. 
Sidoo kale, marka loo eego saadaasha ay sameeyeen falanqeeyayaasha Bangiga Negara Malaysia sanadkii la soo dhaafay, wadanku wuxuu filan karaa heerar soo kabasho deg deg ah oo gaaraya ilaa 8 boqolkiiba sanadka 2021. Laakiin xaddidaadda joogtada ah ee sii kordheysa ayaa sidoo kale mugdi gelisay aragtida. Xaqiiqdii, qiyaasta ugu dambeysay ee Bangiga Adduunku waxay tahay in dhaqaalaha Malaysia uu kori doono ugu badnaan 6.7 boqolkiiba sannadkan. 
Mugdi dhaqaale oo soo foodsaaray dalka - iyo adduunkaba - illaa sanadkii hore, si kastaba ha noqotee, qayb ahaan ayaa lagu iftiimiyay waxqabadka muuqda ee qaybta gacmo gashi ee caagga ah ee Malaysia. In kasta oo waddanku yahay waddanka ugu horreeya soo-saarka gacmo-gashiyada caagga ah, haddana baahida loo qabo qalabka ilaalin shaqsiyeed ayaa turbo-kicisay heerka kobaca waaxda.
Sannadkii 2019-kii, Ururka Soosaarayaasha Gacan-sameynta Rubber-ka ee Malaysia (MARGMA) waxay saadaaliyeen in baahida caalamiga ah ee galoofyada cinjirka ah ay kor ugu kici doonto heerka ugu hooseeya ee boqolkiiba 12, iyagoo gaari doona wadar ahaan 300 bilyan oo gogo 'dhammaadka sannadka 2020.
Laakiin markii fayrasku ka dillaacay dal ilaa waddan kale, qiyaasahan si dhakhso leh ayaa dib loogu eegay. Sida laga soo xigtay tirakoobyadii ugu dambeeyay, dalabku wuxuu u batay qiyaastii 360 bilyan sanadkii hore, isagoo riixaya heerka kobaca sanadlaha inuu ku dhowaado 20 boqolkiiba. Wadarta wax soo saarka, Malaysia waxay soo bandhigtay saddex meelood laba meelood, ama 240 bilyan oo gacmo gashi. Qiyaasta adduunka ee loo baahan yahay sanadkan ayaa gaaraya 420 bilyan. 
Sida laga soo xigtay Cilmi-baarista Suuqa Ku-adkaysiga, kor u kaca baahida loo qabo waxay sababtay koror toban laab ah celceliska qiimaha iibinta galoofyada nitrile - oo ah midka ugu badan ee la raadsado ee ka dambeeya gacmo gashiyada caafimaad ee la tuuri karo. Ka hor inta uusan faafaan faafin, macaamiisha waxay ku qasbanaayeen inay kudhowaad $ 3 xirmo 100 gacmo gashi nitrile ah; qiimaha hadda wuxuu gaadhay ilaa $ 32. 
Waxqabadka xiddigta gacmo gashi ee cinjirku wuxuu abuuray xiiso badan Malaysia iyo meelo kale. Dhinaca kale, wax soosaarayaal cusub ayaa ka soo galay warshadaha waaxyo kala duwan sida guryaha, saliida timirta, iyo IT. Dhinaca kale, baadhitaannada la adkeeyay waxay iftiimisay dhaqammo badan oo macaan. Gaar ahaan, qaar badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee warshadaha ayaa soo jiitay dareenka ku saabsan ku xad gudubka xuquuqda shaqaalaha iyo raadinta macaashka kharashkooda - xitaa waqti badan.
In kasta oo ay ansax tahay, waxaa jira dhowr astaamo qaab-dhismeed oo gacan ka geysta tan. Qaarkood waxay la xiriiraan qaybta gacmo gashi ee cinjirka lafteeda, qaarna waxay kuxiran yihiin jawiga siyaasadeed ee ballaaran ee ay ku shaqeyso. Arrimahani waxay soo jiitaan dareenka baahida loo qabo milkiileyaal adag iyo kuwa dejiya siyaasadaha Malaysia, iyo sidoo kale macaamiisha iyo dawladaha dalalka macaamiisha ah, si ay u eegaan qaybta iyo hababka wax soo saarka si guud oo dhammaystiran.
Sidii dhacday sanadkii hore, dalabka galoofyada caafimaadka ayaa la filayaa inay ku koraan heerar aan horay loo arag sanadkan. Saadaalinta MARGMA ee sanadka 2021 waxay muujineysaa heerka kobaca ee 15-20 boqolkiiba, iyadoo baahida caalamiga loo wado inay garaacdo 420 billion oo gabal gacmeed dhamaadka sanadka, iyadoo ay ugu wacan tahay tirada sii kordheysa ee kiisaska faafitaanka bulshada iyo helitaanka noocyo cusub oo faafa. fayruuska.
Isbedelka lama filayo inuu isbeddelo xitaa iyadoo dalal badani kor u qaadaan barnaamijyadooda tallaalka. Xaqiiqdii, howl gelinta tallaalka balaaran ayaa sii wadi doonta baahida maxaa yeelay galoofisyada baaritaanka ayaa loo baahan yahay si loogu duro talaalada.
Marka laga soo tago rajada qoraxda, waaxdu waxay leedahay dhowr faa'iidooyin kale oo muhiim ah. Waxay ka faa'iideysanaysaa badeecad ay Malaysia soo saarto wax badan - caag.
Helitaanka alaabta ceyriin ee ugu muhiimsan, oo ay weheliso maalgashiyo waqti dheer soconaya oo lagu hagaajinayo howlaha wax soo saarka, ayaa u saamaxday dalka inuu cadeeyo hogaan aan la isku halleyn karin. Tanina, waxay abuurtay nidaam deegaan oo ballaaran oo ay ku dhisan yihiin ciyaartoy dhisan iyo shirkado alaab-qeybiyeyaal ah kuwaasoo si wada jir ah ugu oggolaanaya waaxda inay si hufan u qabato. 
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tartan adag oo ka socda waddamada kale ee soo saara gacmo gashi, gaar ahaan Shiinaha iyo Thailand - oo ah soo saaraha ugu caansan adduunka ee adduunka.
Laakiin '' MARGMA '' waxay rajeyneysaa in Malaysia ay sii haysato booskeeda rasmiga ah iyada oo loo eegayo muuqaalka wax soo saarka u janjeera dhanka dhoofinta ee dalka, oo ay caawinayaan kaabayaasha wanaagsan, jawi ganacsi oo wanaagsan, iyo siyaasado ganacsi oo saaxiibtinimo leh. Waxaa intaa dheer, labada dal ee tartamaya, isku darka kharashka shaqada iyo tamarta ayaa si aad ah uga sarreeya kan Malaysia. 
Intaas waxaa sii dheer, qeybta gacmo gashi ee cinjirku waxay ka heshay taageero joogto ah dowladda. Markii loo arkay inay tahay tiir muhiim ah dhaqaalaha, qaybta cinjirka, oo ay kujirto warshadaha gacmo gashi, waa mid kamid ah 12-ka Goobood ee Muhiimka ah ee Qaranka Malaysia (NKEAs).
Xaaladdan mudnaanta leh waxay ka kooban tahay taageero kala duwan oo dowladda ah iyo dhiirigelinno. Tusaale ahaan, si kor loogu qaado waxqabadyada kor u kaca, dowladdu waxay bixisaa sicirka gaaska ee qiimaha gaaska - oo ah nooc gargaar gaar ah leh, iyadoo la ogyahay in qiimaha gaasku uu yahay boqolkiiba 10-15 boqolkiiba kharashka wax soo saarka galoofyada. 
Sidoo kale, Hay'adda Horumarinta Dadka Yaryar ee Warshadaha Rubber (RISDA) waxay maalgelin xoog leh ku bixisaa barnaamijyada dhir-cagaaran iyo dib-u-beerista.
Markay tahay qeybta dhexe, dadaallada ay qaadeen Guddiga Rubber Malaysia (MRB) si loo kobciyo iskaashiga joogtada ah ee dadweynaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee R&D waxay horseedday casriyeyn teknoolojiyad isdaba joog ah oo ku saabsan qaababka khadadka dhejiska oo hagaagay iyo nidaamyada maaraynta tayada adag.  Iyo, si loo kiciyo howlaha hoose, Malaysia waxay tirtirtay waajibaadkii soo dejinta ee dhammaan noocyada caagga ah ee dabiiciga ah - sidoo kale waa la shaqeeyay. 
Kordhinta ballaaran ee mugga iibka, oo ay weheliso boodboodka qiimaha iibka, qiimaha alaabada oo hooseeya, helitaanka shaqaale jaban, waxsoosaarka wax soo saarka wanaagsan, iyo taageerada gobolka, waxay keeneen koror aad u sarreeya ee dakhliga soo-saarayaasha gunta weyn ee dalka. saafiga mid kasta oo ka mid ah aasaasayaashii Malaysia Afarta Weyn shirkadaha gacmo gashiga - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd, iyo Supermax Corp Bhd - ayaa hadda ka gudbay marinka aadka loo doonayo ee bilyan-doolar.
Marka laga soo tago ciyaartoydii ugu waaweyneyd ee warshadaha ee ku raaxeysanayay sicirka saamiyada ee cirka isku shareeray, oo bilaabay wax soo saar ballaadhin ah, kuna raaxaysanaya faa'iidadooda korodhay,  ciyaartoy yaryar oo ka tirsan qaybta ayaa sidoo kale doorbiday inay kor u qaadaan awooda wax soo saarka. Markaa waa wax soo kordhaya faa'iidooyinka faa'iidada leh ee xitaa shirkadaha qaybaha u kala jaban sida guryaha iyo IT-da ay go'aansadeen inay ku dhiiradaan soo saarista gacmo gashi. 
Marka loo eego qiyaasaha MARGMA, warshadaha gacmo gashi ee Malaysia waxay shaqaaleeyeen kudhowaad 71,800 shaqsiyaadka sanadka 2019. Muwaadiniintu waxay xisaabiyeen 39 boqolkiiba shaqaalaha (28,000) iyo muhaajiriinta ajaanibta ah waxay sameeyeen boqolkiiba 61 haray (43,800).
Marka la eego baahida sii kordheysa ee adduunka, kuwa sameeya gacan-gashiyaasha ayaa hadda wajahaya yaraanta xoogga shaqaalaha. Warshaduhu waxay si deg deg ah ugu baahan yihiin inay kobciyaan shaqaalahooda ku dhowaad 32 boqolkiiba, ama 25,000 oo shaqaale ah. Laakiin shaqaalaynta degdegga ahi waxay ahayd mid caqabad ku ah xayiraadda dawladda ee qorista shaqaalaha dibedda.
Si loo yareeyo xaaladda, shirkadaha ayaa ballaarinaya otomaatiga waxayna si firfircoon u shaqaaleysiinayaan dadka reer Malaysia, in kasta oo mushaharkoodu badan yahay. Tani waa isha soo dhaweynta ee baahida loo qabo shaqada, marka la eego in heerka shaqo la'aanta qaran ay kor uga kacday 3.4 boqolkiiba 2019 ilaa 4.2 boqolkiiba bishii Maarso 2020. 
Faa'iidooyinka aan caadiga ahayn ee ay ku riyaaqeen soosaarayaasha gacmo gashi ayaa isla markiiba soo jiitay dareenka dowladda Malaysia, iyadoo tiro ka mid ah saraakiisha la soo doortay ay dalbadeen in hal mar oo kaliya "canshuurta dabaysha" lagu soo rogo shirkadaha ugu waaweyn. Taageerayaasha ugu codka dheer ee talaabadan waxay ku doodeen in canshuurta noocaas ah, marka lagu daro canshuurta shirkadaha jira (oo horeyba ugu booday 400 boqolkiiba ilaa RM2.4 bilyan sanadka 2020), ay ahayd mid qiil loo helay maxaa yeelay shirkadaha waxaa saaran mas'uuliyad anshax iyo sharci ah " u soo celi ”lacagta dadweynaha adoo bixinaya cashuurtaan dawlada. 
MARGMA ayaa si deg deg ah u diidey soo jeedinta. Canshuurta dabaysha ayaan kaliya joojin doonin qorshooyinka ballaarinta shirkadaha galoofyada si loo daboolo baahida sii kordheysa, laakiin sidoo kale waxay xaddideysaa dib-u-maalgelinta macaashka hawlgallada si loo maalgeliyo dadaallada kala-soocidda iyo is-gaarsiinta.
Tani waxay si fudud halis ugu gelin kartaa Malaysia inay lumiso booskeeda ay ku leedahay waddammada kale ee durba kor u qaadaya wax soo saarka. Waxaa sidoo kale lagu doodi karaa in, haddii canshuur dheeraad ah laga qaado warshadaha inta lagu jiro xilliyada barwaaqada aan caadiga ahayn, in dowladdu sidoo kale diyaar u tahay inay badbaadiso ciyaartoydeeda waaweyn marka ay dhibaato dhacdo.
Kadib markay miisaamtay labada dhinac ee dooda, dowlada waxay joojisay qorshihii ay kusoo rogi laheyd canshuurta cusub. Ujeedada loo soo bandhigay saxaafadda waxay ahayd in soo bandhigida canshuuraha macaashka ay u arki doonaan si aan fiicnayn maalgashadayaasha oo kaliya laakiin sidoo kale kooxaha bulshada rayidka ah.
Intaa waxaa sii dheer, in Malaysia, canshuurta macaashka ee macaashka waligeed laguma soo rogin alaabooyinka dhammaaday - iyada oo loo eegayo dhibaatada ay leedahay go'aaminta heerka sicirka suuqa, gaar ahaan alaabada sida galoofyada cinjirka ah, oo leh noocyo kala duwan, heerar, tilmaam, iyo heerar kala duwan dalalkii u suuq geeyay.  Sidaa awgeed, markii Miisaaniyadda 2021 la soo gudbiyay, kuwa sameeya gacmo gashi ayaa laga dhaafay cashuurta dheeriga ah. Taabadalkeed, waxaa la go'aamiyay in Afarta Weyn shirkaduhu waxay si wadajir ah ugu deeqi doonaan RM400 milyan gobolka si ay uga caawiyaan qaadista qaar ka mid ah kharashaadka tallaalka iyo qalabka caafimaadka. 
In kasta oo dooda ku saabsan waxtarka ku filan ee waaxda ay u fidisay dalka guud ahaan ay umuuqatay mid isku dheelitiran, waxa aan la inkiri karin diidmo waxa uu ahaa muranka hareeyay madaxdeeda, gaar ahaan Top Glove. Shirkadan ayaa kaligeed gacanta ku haysa rubuc ka mid ah wax soo saarka gacmo gashiyada adduunka waxayna si aan la qiyaasi karin uga faa'iideysatay heerarka sare ee hadda jira.
Top Glove waxay ahayd mid ka mid ah kuwii hore ugu guuleystey dhibaatada caafimaad. Waad ku mahadsan tahay kobaca aan la qiyaasi karin ee iibka galoofyada, shirkaddu waxay jabisay diiwaanno badan oo faa'iido ah. Rubuckeedii ugu dambeeyay ee maaliyadeed (oo ku eg 30 Nofeembar 2020), shirkaddu waxay diiwaangelisay faa'iidada ugu sarreysa ee saafiga ah ee RM2.38 bilyan.
Sannad-sannad-gudihiis, macaashkiisa saafiga ah ayaa ka kordhay 20 jeer sanadkii ka horreeyay. Xitaa kahor faafida, Top Glove waxay ku jirtay raadin balaadhin ah in kabadan laba sano, iyada oo ka sii kordheysa awoodeeda 60.5 bilyan oo gabal gacmeed bishii Ogosto 2018 ilaa 70.1 bilyan oo gogo 'bishii Nofeembar 2019. Markuu ku socday guushii u dambeysay, soo saaraha galoofiyaha hada wuxuu qorsheynayaa inuu kordho awoodda sannadlaha ah ee boqolkiiba 30 dhammaadka 2021 illaa 91.4 bilyan oo gogo '. 
Si kastaba ha noqotee, bishii Nofeembar ee sanadkii hore, waxaa soo baxay war sheegaya in dhowr kun oo shaqaale ah - oo u badan shaqaale ajnabi ah - mid ka mid ah dhismayaasha waxsoosaarka shirkadda ay tijaabisay cudurka loo yaqaan 'coronavirus'. Maalmo gudahood, qolal jiif badan oo shaqaale ah ayaa loo qoondeeyay inay yihiin kooxo waaweyn oo COVID ah dowladuna waxay si deg deg ah u soo rogtay dhowr toddobaad oo MCO (EMCO) ah oo la xoojiyay.
Cudurka dillaacay ayaa sidoo kale ku kallifay dowladda inay furto illaa 19 baaritaanno oo laga sameeyay lix ka mid ah shirkadda Top Glove. Tani waxay daba socotey hawlgallo fulin isku mar ah oo ay fulisay Wasaaradda Kheyraadka Dadku.
Shaqaalaha ku lugta leh kutlada waxaa la soo saaray Amarka Ilaalinta Guryaha (HSO) muddo 14 maalmood ah waxaana loo sameeyay in ay xirtaan xarigyo silsilado ah oo loogu talagalay ilaalinta iyo baaritaanka caafimaadka maalinlaha ah.
Dhammaan kharashyada ku baxa baaritaanka shaqaalaha 'COVID-19', xarumaha karantiillada iyo cuntada la xiriirta, gaadiidka iyo hoyga waxaa qaadaya Top Glove. Dhamaadka sanadka, in ka badan 5,000 oo shaqaale ajaanib ah oo ka tirsan Top Glove ayaa la soo sheegay inuu cudurka ku dhacay.  Inyar laakiin kiisaska soo noqnoqda ayaa sidoo kale laga soo sheegay xarumaha wax soo saarka oo ay leeyihiin sadexda kale Afarta Weyn shirkadaha, iyagoo soo jeedinaya in dhibaatadu aysan ku koobnayn hal shirkad. 
Baadhitaano rasmi ah ayaa shaaca ka qaaday in qodobka koowaad ee ka dambeeya soo ifbaxa deg degga ah ee kutubyo badan oo meerayaal ah oo ku baahsan qaybta gacmo gashi ay ahaayeen xaaladaha nolosha ee foosha xun ee shaqaalaha. Qolalka la seexdo ee muhaajiriinta ayaa aad u camiran, nadaafad darrana aan lahayn, isla markaana si hawo leh u hawo lahayn - waana tan ka hor inta uusan cudurku dhicin.
Xaaladda cakiran ee xaaladda waxaa soo gudbinaya faallooyin uu ka bixiyay Agaasimaha Guud ee Waaxda Shaqada ee Jasiiradda Malaysia (JTKSM), oo ah hay'ad hoos timaadda Wasaaradda Kheyraadka Aadanaha: “Dambiga ugu weyni wuxuu ahaa in loo shaqeeyayaashu ay ku guuldareysteen inay ka codsadaan Shahaadada hoyga Shaqaalaha. Waaxda hoos timaada Qeybta 24D ee Shaqaalaha 'Heerarka Ugu Hooseeya ee Guryeynta iyo Adeegyada Waxkaqabashada 1990. Tani waxay horseeday dembiyo kale oo ay ka mid yihiin hoyga ciriiriga ah iyo qolalka jiifka, kuwaas oo aan raaxo lahayn oo hawo fiicnayn. Intaas waxaa sii dheer, dhismayaasha la dejin jiray shaqaalaha ayaan u hoggaansamin xeerarka maamulka degmada. JTKSM waxay qaadi doontaa talaabada xigta si ay u gudbiso waraaqaha baaritaanka ee horay loo furay si dhamaan dambiyadaan loogu baari karo sharciga. Xadgudub kasta oo hoos yimaada Sharciga wuxuu leeyahay ganaax RM50,000 iyo sidoo kale waqti xabsi ah. ”
Abaabulka guryeynta ee liidata kaliya maahan arrin walwal leh oo soo food saartay waaxda gacmo gashi. Top Glove ayaa sidoo kale lagu soo rogay indhaha caalamka bishii July ee sanadkii hore, markii Kastamka Mareykanka iyo Ilaalinta Xuduudaha (CBP) ay ku dhawaaqeen inay mamnuuceen soo dejinta labo ka mid ah laamaheeda sababo la xiriira walaac xoog leh.
In ay 2020 Liiska Alaabada ay soo saartay Shaqada Carruurta ama Shaqada Xoog Warbixinta, Waaxda Shaqada ee Mareykanka (USDOL) ayaa lagu eedeeyay Top Glove ee:
1) si joogto ah shaqaalaha looga qaado khidmadaha qorista badan;
2) ku qasbida inay shaqeeyaan waqti dheeri ah;
3) iyaga oo ka dhigaya inay ku shaqeeyaan xaalad khatar ah;
4) ugu hanjabayo ganaaxyo, mushahar iyo basabor oo laga joojinayo, iyo xaddidaadyo dhaqdhaqaaqa.  Markii hore, Top Glove way beenisay sheegashooyinka gebi ahaanba, iyagoo xaqiijinaya in aan loo dulqaadanayn ku tumashada xuquuqda shaqaalaha.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan awoodin inay si qancisa wax uga qabato arrimaha waqtigii loogu talagalay, shirkaddu waxay ku qasbanaatay inay bixiso RM136 milyan shaqaalaha soo galootiga ah si ay u siiso lacag bixinta khidmadaha qorista.  Hagaajinta dhinacyada kale ee daryeelka shaqaalaha, si kastaba ha noqotee, waxay ku tilmaameen "shaqo socota" maamulka Top Glove. 
Dhammaan arrimahan waxay soo jiiteen fiiro gaar ah deegaanka siyaasadeed ee ballaaran, iyo dhibaatooyinka la xiriira.
Xad-dhaaf nidaamsan oo ku yimaada shaqada aan xirfad lahayn. Malaysia waxay muddo dheer ku tiirsaneyd shaqaale ajnabi ah oo aan qaali ahayn kana soo gala dhaqaalaha saboolka ah. Marka loo eego tirooyinka rasmiga ah ee ay daabacday Wasaaradda Kheyraadka Dadweynaha, in 2019, ku dhowaad 18 boqolkiiba shaqaalaha Malaysia waxay ka koobnaayeen shaqaale muhaajiriin ah.  Si kastaba ha noqotee, haddii shaqaalaha ajaanibta ah ee aan sharciga lahayn la tixgeliyo, tiradani waxay gaari kartaa meel kasta oo laga bilaabo 25 ilaa 40 boqolkiiba. 
Dhibaatada waxaa sii weheliyay xaqiiqda inta badan la dayacay ee ah in muhaajiriinta iyo shaqaalaha muwaadiniinta ah aysan aheyn bedello hagaagsan, iyadoo heerka waxbarashaduna tahay astaamaha lagu garto. Intii u dhaxeysay 2010 iyo 2019, inta badan shaqaalaha soo galootiga ah ee soo galay suuqa shaqada ee Malaysia waxay heleen ugu badnaan waxbarasho dugsi sare, halka saamiga muwaadiniinta jaamacadaha wax ku bartay ee shaqaaluhu aad u kordheen.  Tani waxay sharraxeysaa oo keliya farqiga u dhexeeya dabeecadaha shaqooyinka ay qabtaan inta badan shaqaalaha dibadda iyo kuwa Malaysiya, laakiin sidoo kale dhibaatada ay wajahayaan warshadaha gacmo gashiga ee buuxinta jagooyinka bannaan ee dadka deegaanka.
Dhaqan xumida xeerarka iyo bedelida mowqifyada siyaasadeed. Dhibaatooyinka ragaadiyay warshadaha ayaa ah kuwa cusub. Eedeymaha ku saabsan xaaladaha shaqada iyo guryaha oo liita ee shaqaalaha qeybta gacmo gashi ayaa markii ugu horeysay soo shaac baxay dhowr sano ka hor. Sannadkii 2018, laba bandhig oo madax bannaan - oo ay sameeyeen Thomson Reuters Foundation  iyo the Guardian  - ayaa shaaca ka qaaday in shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Top Glove ay inta badan ka shaqeeyaan xaalado la kulmay dhowr ka mid ah shuruudaha Ururka Shaqaalaha Caalamiga ah ee "addoonsiga casriga ah iyo xoog ku shaqaysiga" . In kasta oo ay dawladda Malaysia markii ugu horraysay kaga jawaabtay iyada oo si aan qarsoodi lahayn u taageertay raadraaca rikoor sameeyaha,  way rogtay mawqifkeedii ka dib markii Top Glove qirtay jabinta sharciyada shaqaalaha. 
Dabeecada iswaafaqsan ee siyaasada dowlada ee ku aadan shaqaalaha muhaajiriinta ah ee qeybta galoofyada ayaa sidoo kale la arkay markii ay soo baxeen eedeeymaha USDOL. In kasta oo Wasaaradda Kheyraadka Dadweynaha ee Malaysia ay markii hore sheegtay in mamnuucista soo dejinta ee 'Top Glove' ay ahayd "mid aan caddaalad ahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn",  waxay dhawaan u rogtay sharraxaaddeeda meelaha ay deggan yihiin shaqaaluhu "mid laga xumaado",  waxayna soo saartay sharci deg deg ah oo qasbaya gacmo gashi Shirkadaha wax soosaarka si ay u siiyaan hoy ay ku noolaadaan iyo waxyaabaha ay helaan shaqaalaha soogalootiga ah si ay u xakameeyaan faafida fayraska. 
Baahida Sare. In kasta oo tirada bukaanada uu ku dhacay COVID ay sii kordhayeen, haddana barnaamijyada tallaalka ee adduunka oo dhan ayaa iyaguna qaadaya uumiga. Sidaa awgeed, jadwalka wax soo saarka ayaa sii kordhaya, iyadoo cadaadiska mararka qaar uu ka imaanayo meelo aan la fileynin.
Bishii Maarso ee sanadkii hore, Safaaradda Mareykanka ee Malaysia ayaa dib u daabacday sawir ay ku qoran tahay "Soo saarista galoofisyada caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee caafimaad, adduunku wuxuu ku tiirsan yahay Malaysia dagaalka lagula jiro COVID-19".  Isku soo wada duuboo, qoraalka ayaa la soo dhigay maalmo uun ka dib markii Mareykanku uu ka qaaday cunaqabateyntii saarneyd lix bilood ee saarneyd dhoofinta mareykanka ee WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Isla waqtigaas, Safiirka Midowga Yurub ee Malaysia wuxuu ku booriyay kuwa sameeya gacmo gashiga maxalliga ah inay "hal-abuurnimo" sameeyaan hubinta soosaarka 24/7 si loo daboolo baahida degdegga ah ee gobolka ee qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed. 
In kasta oo ay jiraan walaac isa soo taraya oo ku saabsan in shaqooyinka khasabka ah ee qasabka ah ay weli ku badan yihiin shirkadaha gacmo gashiga Malaysia, baahida loo qabo galoofisyada la tuuri karo ma muujinayaan calaamado hoos u dhac ku ah qaybaha kale ee adduunka sidoo kale.
Dowlada Kanada ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay baareyso eedeymaha ku saabsan tacadiyada shaqaalaha loogu geysto warshadaha gacmo gashiga ee Malaysia kadib markii la daabacay wargeyska CBC Suuqa warbixin. Dalabka, si kastaba ha noqotee, uma badna inuu dhaco. Hay'adda Adeegyada Xudduudka Kanada ayaa faallo ka bixisay "ma aysan isticmaalin canshuuraha laga mamnuucay badeecadaha in lagu soo saaro xoog shaqaale. Aasaasida in badeecada lagu soo saaray shaqo qasab ah waxay u baahan tahay cilmi baaris iyo falanqeyn muhiim ah iyo macluumaad taageeraya. ”
Australia gudaheeda, sidoo kale, baaritaanka ABC wuxuu helay cadeymo muhiim ah oo ku saabsan dhiig-miirashada shaqaalaha xarumaha wax soo saarka gacmo gashi ee Malaysia. Afhayeen u hadlay Ciidamada Xuduudaha ee Australia ayaa lagu soo waramayaa inuu yiri "dowlada waxay ka walaacsan tahay eedeymaha addoonsiga casriga ah ee la xiriira soo saarida qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed, oo ay ku jiraan galoofisyada cinjirka ah." Laakiin marka loo eego Mareykanka, Australia uma baahna kuwa wax soo dejiya si ay u caddeeyaan inaysan jirin wax qasab ah oo ku jira silsiladdooda. 
Dowlada UK waxay sidoo kale sii waday inay kahesho galoofisyada caafimaad Malaysia, inkasta oo ay qirayaan warbixin ka soo baxday wasaarada arimaha gudaha oo soo gabagabeysay “musuqmaasuqa wuxuu ku badan yahay nidaamyada shaqaalaysiinta ee Malaysia iyo wadamada laga soo galootiga muhaajiriinta ah, wuxuuna taabanayaa qeyb kasta oo ka mid ah silsiladaha shaqaale qorista”. [37 ]
In kasta oo dalabka galoofyada ay sii ballaaranayaan, haddana isla sidaas lagama dhihi karo sahayda. MARGMA ayaa dhowaan sheegtay in yaraanta caalamiga ah ee galoofyada cinjirka ah ay sii socon doonto wixii ka dambeeya 2023. Kala-goysyada galoofku waa hawl waqti badan qaadata, xarumaha wax soo-saarkana laguma ballaadhin karo habeen keliya.
Caqabadaha lama filaanka ah sida COVID ee ka dilaacay warshadaha wax soo saarka ee gacmo gashi iyo weel yaraanta maraakiibta ayaa sii xumeeyay xaalada. Maanta, waqtiga hogaaminta ee amarrada waxaa lagu qiyaasaa inuu ku dhow yahay lix illaa siddeed bilood, iyadoo dalabyada ka imanaya dawladaha quusta ay kor u qaadayaan qiimaha iibka celceliska.
Qeybta galoofyada cinjirka ee Malaysia waa isha shaqo, sarrifka lacagaha qalaad, iyo faa iidada dhaqaalaha ee waqtiga tijaabada. Baahida sii kordheysa iyo qiimaha sii kordhaya ayaa ka caawiyay shirkadaha aasaasay inay koraan oo ay dhiirigeliyaan soo galootiga cusub ee qaybta. Haddaan horay u sii eegno, ballaadhinta waaxda ayaa la hubinayaa, ugu yaraan muddada gaaban, iyada oo ay ugu wacan tahay baahida joogtada ah, ee qayb ka mid ah, ee wadayaasha tallaalka ay ku bilaabmayaan.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan dareenka cusub ee la helay ma ahayn mid wanaagsan. Faa'iidada weyn ee waaxda ee jawi kale oo xun ayaa horseeday baaqyo cashuurta dabaysha. Kooxaha shaqaalaha iyo bulshada rayidka waxay ku baaqeen in faa iidooyinka qaar si aad ah loo wadaago, gaar ahaan marka la fiiriyo taageerada weyn ee gobolka ee waaxdu hesho. Dhamaadkii, inkasta oo waaxda aan la canshuurayn, haddana hoggaamiyeyaasha warshadaha ayaa isku raacay inay si iskood ah gacan uga geystaan ​​soo saarista tallaalka.
Waxyeellada intaas ka sii badan ayaa ahayd muujinta in dhaqamada shaqada ee dhowr ka mid ah ciyaartoy hoggaamineed ee waaxdan ay ahaayeen kuwo ka fog aqbalidda. In kasta oo aan lagu sifayn waaxda gacmo gashi caaggu guud ahaan, eedeymo kulul oo la xiriira shirkadaha qaarkood ayaa la soo qaaday marar badan oo ka horreeyay faafitaanka COVID-19. Isku darka dareenka caalamiga ah iyo suurtagalnimada heerarka infekshinka sare ayaa kallifay mas'uuliyiinta inay wax ka qabtaan.
Tani, markeeda, waxay kicisaa arrimaha ku saabsan macnaha guud ee Malaysia, laga bilaabo qawaaniinta xukuma qorista, guryaha iyo daaweynta shaqaalaha ajaanibta ah ilaa kormeer habboon iyo kormeerka goobaha shaqada iyo xarumaha hoyga. Dowladaha macaamilku kama dhaafo mas'uuliyadda, iyada oo baaqyada hagaajinta ee waaxda la soo saarayo isla mar ahaantaana lagu baaqayo in la yareeyo waqtiyada wax soo saarka iyo in la kordhiyo heerarka wax soo saarka. COVID-19 waxay si cad u muujisey in kalaqeybsiga daryeelka bulshada iyo caafimaadka bulshada inteeda kale uusan aheyn mid cad, oo runtiina ay si aad ah isugu xiran yihiin.
Ku saabsan qorayaasha: Francis E. Hutchinson waa Sare Sare iyo Isku-duwaha Barnaamijka Daraasaadka Malaysia, iyo Pritish Bhattacharya waa Sarkaalka Cilmi-baarista ee Barnaamijka Daraasaadka Dhaqaalaha Gobolka ee ISEAS - Machadka Yusof Ishak Tani waa tan labaad ee labo aragti oo eegaysa qeybta gacmo gashi ee Malaysia . Aragtida koowaad (2020/138) waxay iftiimisay waxyaabihii ka qayb qaatay koboca warshadaha ee aan horay loo arag 2020.
Xigasho: Maqaalkani waxaa lagu daabacay ISEAS Perspective 2021/35, 23 March 2021.